DORO TANETY SESILANY ETO MADAGASIKARA : Famonoan-tena faobe
Voazimbazimba, mihapotiky ny afo tanteraka ny valan-javaboary arovana ao Ankarafantsika. 27 octobre 2021
Tamin’ity taona 2021 ity dia fantatra izao fa indroa nahitana fahamaizana goavana tao amin’ity faritra arovana ity. Ny voalohany, raha tsiahivina, dia ny volana septambra lasa teo izay nahamaizana velarana 3200 ha. Tao anatin’ny dimy andro ireo ekipa avy eo anivon’ny Minisiteran’ny Tontolo iainana sy ireo olona tsara sitrapo hafa tonga nanampy no niaraka nifehy ny afo. Ny faharoa manaraka dia ny faran’ny herinandro lasa iny indray anefa, nanomboka ny 15 oktobra no nahazo vahana ny firehetana tao amin’ity valan-javaboary ity.
Ny angom-baovao no nahalalana tamin’ny toerana telo samihafa no niaingan’ny afo. Velarana 3250 ha no tombanana fa kilan’ny afo. Ny sabotsy 16 oktobra lasa iny araka izany no niady mafy tamin’ny afo ny ekipan’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny vondrona “ Madagascar National Parks” ary ny Fokonolona, nampian’ireo Zandary, ny avy ao amin’ny Tafika ary koa ny Polisim-pirenena. Nananosarotra tokoa ny fahamaizana nandritra io fotoana io ka voalaza fa efa maherin’ny 400 tany ho any ireo olona niaraka nisalahy namono ny afo.
Araka ny fanazavana avy tamin-dramatoa Baomiavotse Vahinala Raharinirina, Minisitry ny tontolo iainana, mikasika ity tranga ity : “ny mampalahelo, hoy izy, dia tebok’afo telo be izao no indray narehitra ary toa niniana natao izany ilay firehetana”. Amin’izao fotoana izao aloha dia lehilahy iray tompon’andraikitra no efa voasambotra raha toa ka voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny raharaha. “Andrasana fatratra ihany koa ny valin’ny fanadihadiana lalina atao izay mbola mitohy hatreto satria tsy azo ekena ary koa tsy ho vita moramora foana ny fanimbana tanindrazana toy izao”, hoy hatrany Ramatoa Minisitra.
Mbola vonona hanarina sy hiady amin’ny doro tanety izay manimba zavatra betsaka eto amin’ny Firenena izy miaraka amin’ny Fitondram-panjakana ary koa nankasitraka indrindra ny ekipa rehetra miatrika ny ady goavana amin’ny afo niseho matetika tato ho ato. Mankahery rahateo koa ireo ekipa manoloana amin’ny vesatry ny tsindry sy fampatahorana mahazo azy ireo amin’ny fanatanterahana ilay atao hoe “tolérance zéro” na ny tsy fandeferana eo anatrehan’ny tsy fanarahan-dalàna ara-tontolo iainana.
Nirehitra teny “Analamanga Parc” sy Ambohidratrimo
Mahazo vahana hatrany ny doro tanety amin’ny Faritra maro manerana ny Nosy ankehitriny. Ny folakandron’ny talata 19 oktobra 2021 ihany koa mantsy dia nahitana firetahana ihany koa tao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo. Soa fa nalaky voafehy ihany ny afo rehefa tonga teny an-toerana ireo tompon’ andraikitra. Manamafy mandrakariva moa Ramatoa Minisitra fa “misaona ny Firenentsika isaky ny misy ala ringana sy may toy izao. Indrindra moa fa ny firehetana izay sesilany tato ho ato. Tsy fatiantoka ho an’ny Minisitry ny Tontolo Iainana, na ny “MEDD irery akory fa famonoan-tena faobe, mamotika hatramin’ny hoavin’ny taranaka”. Na ny rano hosotroina ity efa manahirana, ny rotsak’orana mihakely, ny haintany mitombo,... dia mbola mandoro lava sy mandrora mitsilany toy izao ihany, mahaontsa tanteraka ny zava-misy”, hoy hatrany izy .
Raha tsiahivina, ny 11 oktobra 2021 no nisehoana firehetana tao “Analamanga Park”. Ny ala sy ny tanety tao anatiny izay tsy lavitra ny bungalow VIP no may tamin’io fotoana io. Nalaky voafehy ny firehetana ka tsy nisy may ireo fotodrafitrasa vao vita. Nilaza moa tamin’izany ny Governoran’Analamanga rehefa nijery ifotony ny zava-nisy fa “nisy baoritra may tao izay nahatonga ny ahiahy sao ho nisy nandrehitra ihany koa”, tsy hay na fifanandrifian-javatra, hoy izy, na koa sotasota mialoha ny fikasana hitokana ny fotodrafitrasa vao vita natao ny 16 oktobra lasa teo iny. Mbola manao ny famotorana ny Zandary nandray an-tanana ny raharaha amin’izao fotoana izao. Tsiahivina, fa ny taona 2017 no efa nisy fahamaizana tao ary bungalow miisa telo no levon’ny afo tamin’izany izay efa nosoloina vaovao ankehitriny.
Manohana ny ady ny Fitsarana sy ny mpitandro filaminana
Manoloana ny toe-draharaha mafampana ankehitriny àry dia miezaka ny Fitondram-panjakana amin’ny fifanampiana sy fandraisana andraikitra hentitra. Ny Minisiteran’ny Tontolo iainana, ny mpitandro filaminana ary ny Fitsarana no hiditra an-tsehatra sy miara-miasa hatreto. Tsy mora ary tena sarotra ny asa miandry azy ireo ka anentanana ny vahoaka malagasy mandrakariva satria izay “mandoro tanety mamono taranaka”. Etsy an-kilany dia iharan’ny sazy mafy mifandraika amin’izany rahateo koa ireo olona tratra mandoro tanindrazana.